URhh Hashanah Ugawula iiplani ze-Apple kwiNyunithi
Unqulo & Umoya Iiholide ezibalulekileyo
Inkolelo yeRosh Hashanah
URosh Hashana ngumNyaka omtsha wamaYuda , wabhiyozelwa ngosuku lokuqala lwenyanga yesiHebhere yaseTishrei (ngoSeptemba okanye ngo-Oktobha). Kwakhona kuthiwa yiSuku lokuKhumbuza okanye uSuku loMgwebo kuba luqala ixesha eli-10 xa amaYuda ekhumbula ubuhlobo babo noThixo. Abanye abantu abangamaYuda bayabhiyozela uRosh Hashana iintsuku ezimbini, abanye bakhuphela iholide nje ngosuku olunye.
Njengamaholide amaninzi amaYuda, kukho amasiko okutya ahlanganiswa noRosh Hashanah .
Enye yezona ziqhelo ezidumileyo neziyaziwayo zibandakanya ukutshisa iiplisi ze-apple zibe ngunyama. Olu nxu lumnandi luvela kwisiko elidala lamaYuda lokutya ukutya okumnandi ukubonisa ithemba lethu ngomnyaka omtsha omnandi. Esi siko kukubhiyozela ixesha lentsapho, zokupheka ezikhethekileyo kunye nokutya okuthambileyo.
Isiko lokubamba i-apple slic in honey is believed to have been initiated by the Ashkenazi Jews ngexesha elidlulileyo lixesha kodwa ngoku isebenza ngokuqhelekileyo kubo bonke amaYuda athile.
Ukongezelela ukubonakalisa ithemba lethu lonyaka omnandi, ngokwenkolelo yamaYuda, i-apula imela uShekhinah (umfazi wesimo sikaThixo). Ngexesha likaRosh Hashana, amanye amaYuda akholelwa ukuba uShekhinah usibukele kwaye ahlola indlela esiziphatha ngayo kunyaka odlulileyo. Ukutya ubusi namaapula kubonisa ithemba lethu lokuba uShekhinah uya kusigweba ngobubele aze abuke phantsi kuthi ngobumnandi.
Ngaphandle kobudlelwane bakhe noShekhinah, amaYuda amandulo ayecinga ukuba iiaples zaziphilisa izixhobo.
URabi UAlfred Koltach ubhala kwiNcwadi yesiBini yamaYuda yokuba nini na xa uKumkani uHerode (73-4 BCE.) Evekile, wayedla i-apula; kwaye ngamaxesha e-Talmudi ama-apula ayevame ukuthunyelwa njengezipho kubantu abagula kwimpilo.
Iintsikelelo ze-Apple kunye noHu
Nangona i-apula kunye nobusi bangadliwa kwieholide, bahlala badliwa ndawonye ngobusuku bokuqala bukaRosh Hashanah.
AmaYuda adibanisa iiplisi ze-aple zibe ngunobusi kwaye athi umthandazo ucele uThixo ukuba ube ngumNyaka omtsha omnandi. Kukho amanyathelo amathathu kulo mkhuba:
1. Yithetha inxalenye yokuqala yomthandazo, eyintsikelelo yokubulela uThixo kwiipulo:
Ubusisiwe wena Nkosi, uThixo wethu, uMlawuli wehlabathi, uMdali weqhamo lomthi. ( NoBharuki, noAdo-nai, no-Ehlo-haynu meleki, noHoyim, noHakeki;
2. Thatha iimbole ze-apple zidibene ngobusi
3. Khawuthi inxalenye yesibini yomthandazo, ecela uThixo ukuba avuselele ngexesha loNyaka omtsha:
Mhlawumbi kube yintando Yakho, Adonai, wethu uThixo noThixo wookhokho bethu, ukuba Uhlaziyelele unyaka omuhle nowomnandi. ( UYehoyada, unyana ka-Elimeleki, uNdikhoyo, u-Elohiyada, unyana ka-Abhimeleki.
Iikhowudi Zokutya zamaYuda
Ukongeza kwiipulo kunye nobusi, kukho ezinye izinto ezine eziqhelekileyo ezidliwa ngabantu abangamaYuda kwiNtsha entsha yamaJuda:
I-challah ejikelezayo: Isonka seqanda esisikiweyo esisinye sezibonakaliso zokutya ezidume kakhulu kwiNtsha entsha yamaYuda emva kweeaples noon.
Ikhekhe leHuni: Ikhekhe elimnandi elenziwe ngamagqabi ekwindla njengama-clove, i-sinamoni kunye ne-allspice.
Isiqhamo esitsha: Iharharnate okanye esinye isiqhamo esandula kufike ngexesha kodwa asikadliwayo.
Intlanzi: Intloko yentlanzi idla ngexesha likaRosh Hashana njengelibonakaliso lokuzala kunye nobuninzi.
Gelt kunye neholide yamaJuda eHanukkah
Ngubani oyiHuckleberry Finn?
Ukuthelekiswa kobuzwe eChina naseJapan
I-Palettes yokugcina i-Activity
UFundo lwezithombe zeRoger Federer kwangaphambili
I-Ricci v. DeStefano: Ingxaki yokuNyulwa koBucala?
Ukuguqula iMillimeters ukuya kumaCentimeters
Kutheni Iimpapu Zomnye Wezakhono Zesiqhelo okanye Iimpawu Ezibuhlungu?
Iingoma eziphezulu zeLowboyboy yee-80s